ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ နျူကလီးယား လက်နက်တွေ ကြောင့် မြောက်ကိုရီးယား ကို ဘယ်ကောင် မှ လာမထိရဲဘူး လို့ ဆိုလာတဲ့ ကင်ဂျုံအန် – Let Pan Daily
Let Pan | July 29, 2020 | World News | No Comments
နျူကလီးယား လက်နက်တွေက သူတို့နိုင်ငံ ရဲ့ လုံခြုံရေး ကို အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် မြောက်ကိုရီးယား အနေ နဲ့ စစ်ပွဲတွေ တိုက်ခိုက် ဖို့ မလိုအပ်တော့ဘူး လို့ ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန် က ပြောခဲ့ ပါတယ်။ ကိုရီးယားစစ်ပွဲ ကို အဆုံးသတ်စေ ခဲ့တဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ၆၇ နှစ်မြောက် အထိမ်း အမှတ် အဖြစ် ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်က စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ကို မိန့်ခွန်းပြောကြားချိန် မှာ ကင်ဂျုံအန်က အခု လို ပြောခဲ့တာပါ။
North Korean leader Kim Jong Un reacts with scientists and technicians of the DPRK Academy of Defence Science after the test-launch of the intercontinental ballistic missile Hwasong-14 in this undated photo released by North Korea’s Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang July, 5, 2017. KCNA/via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. TPX IMAGES OF THE DAY – RTX3A3DQ
” အားထား ရလောက်အောင် ထိရောက် တဲ့ နျူကလီးယား ဖျက် လက်နက်တွေ ကြောင့် ဒီကမ္ဘာပေါ် မှာ စစ်ပွဲတွေ ထပ်ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ ရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ အနာဂတ်က ထာဝရ လုံခြုံစိတ်ချရ ပါပြီ ”လို့ ကင်ဂျုံအန်က ပြော ခဲ့ပါတယ်။ နယ်ချဲ့ ကျူးကျော်သူေ တွနဲ့ ရန်လိုတဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေက ဖိအားပေးတာ ၊ စစ်ရေးခြိမ်းခြောက် တာတွေ လုပ်လာရင် နျူကလီးယား လက်နက်တွေက မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကို ကာကွယ်ပေးနိုင် လိမ့်မယ် လို့ သူက ဆို တယ် ။
TOPSHOT – Russian President Vladimir Putin welcomes North Korean leader Kim Jong Un prior to their talks at the Far Eastern Federal University campus on Russky island in the far-eastern Russian port of Vladivostok on April 25, 2019. (Photo by Yuri KADOBNOV / AFP)YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images
နျူကလီးယား လက်နက်တွေက မြောက်ကိုရီး ယားနိုင်ငံ ဆက်လက် ရပ်တည်နိုင်ရေး အတွက် အဓိက ကျတယ် လို့ ထင်ဟပ်ပြနေတဲ့ ကင်ဂျုံအန် ရဲ့ ပြောစကားဟာ မြောက် ကိုရီးယားက နျူကလီးယား လက်နက် စွန့်လွှတ်ရေးသဘော တူစာချုပ်ချုပ်ဆို ဖို့ ဘယ်လောက် ခက်ခဲလဲ ဆိုတာ မီးမောင်း ထိုးပြနေ ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ က စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရ မ့်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန် တို့ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ပြီး ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ်အရေး တိုးတက်မှုရ လာမယ်လို့ ထင်မှတ်ခဲ့ကြပေ မဲ့ သိသာထင်ရှား တဲ့ တိုးတက် မှု မရှိခဲ့ ပါဘူး ။
ကြက်ပွဲ ရှုံးလာ ပြီးနောက် ယောက္ခထီး ရဲ့ ဝှေးစေ့ ကို ညှစ်ကာ သတ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး ရဲ့ လုပ်ရပ် …
ကူးစက်မှု ပျံ့နှံ့နေ တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ကိုဗစ်ကြောင့် လူတဦး စတင် သေဆုံး
တောင်တရုတ် ပင်လယ်အရေးက ပေးလိုက် တဲ့ သခ်န်းစာ… 👇👇👇 ( လင်းယုံနဲ့ နဂါး စစ်များ ကစားခဲ့ ရင် အမြတ်ထွက်မယ့် မြန်မာအခြေအနေ )